आईवी लीग स्कूलका लागि स्वीकृति दर: 2020 को कक्षा
आईआईवी लीग स्कूलहरू देशमा सबैभन्दा कम भर्तीको केहि छ
आइवी लीग सबै स्कूलहरूमा 14% वा कम अनुमोदन दर छ, र सबै विद्यार्थीहरू असाधारण अकादमिक र गैरकानूनी अभिलेखसँग स्वीकृत हुन्छन्। हालको वर्षहरूमा, कर्नेल विश्वविद्यालयले आइभाइहरूमा उच्च स्वीकृति दर पाएका छन्, र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा न्यूनतम प्रवेश दर रहेको छ।
तलको तालिका आईवी लीग स्कूलहरूको सबैभन्दा हालको स्वीकृति दर डेटा प्रस्तुत गर्दछ। कुन प्रकारका ग्रेडहरू र मानककृत परीक्षण स्कोरहरू जुन तपाइँ भर्खरै भर्ना हुन आवश्यक छ हेर्न, दाहिने हात स्तम्भमा ग्राफ लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
2020 को कक्षा को लागि आईवी लीग स्वीकृति दर
दाखिल भएको स्वीकृति
मूल्याङ्कन गर्नुहोस् मुहान GPA-SAT-ACT
ब्राउन विश्वविद्यालय 32,390 2,919 9% ब्राउन बाट समाचार ग्राफ हेर्नुहोस्
कोलम्बिया विश्वविद्यालय 36,292 2,193 6% कोलम्बिया स्पेक्टरेटर ग्राफ हेर्नुहोस्
कर्नेल विश्वविद्यालय 44,966 6,277 14% कर्नेल क्रनिकल ग्राफ हेर्नुहोस्
डार्टमोउथ कलेज 20,675 2,176 10.5% डार्टमोथ समाचार ग्राफ हेर्नुहोस्
हार्वर्ड विश्वविद्यालय 39,041 2,037 5.2% हार्वर्ड पत्रिका ग्राफ हेर्नुहोस्
प्रिंसटन विश्वविद्यालय 29,303 1,894 6.5% प्रिन्सटन मा समाचार ग्राफ हेर्नुहोस्
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय 38,918 3,661 9.4% डेन पेनसेल्भियन ग्राफ हेर्नुहोस्
येल विश्वविद्यालय 31,455 1,972 6.7% येल समाचार ग्राफ हेर्नुहोस्
आईआईवी लीग स्वीकृति दर किन कम छ?
प्रत्येक वर्ष, आईवी लीगमा समग्र स्वीकृति दरहरू कम र कम हुन्छ तापनि व्यक्तिगत विद्यालयहरूले समय समयमा समयको बढ्दो वृद्धि देख्न सक्छ। छनौटमा यो जस्तो देखिने अनौठो वृद्धिले के ड्राइव गर्दछ?
यहाँ केहि कारकहरू छन्:
साधारण अनुप्रयोग: स्याउका अन्य छनौट महाविद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरूसँग इआईभी लीग स्कूलका सबै आम आवेदन स्वीकार्छन्। यसले विद्यार्थीहरूको लागि धेरै स्कूलहरूमा आवेदन गर्न सजिलो बनाउँछ ( मुख्य अनुप्रयोग निबंध समेत ) मा एकपटक मात्र सिर्जना गर्न आवश्यक छ। उनले भने, सबै आइभाइले उनीहरूको आवेदकहरुलाई बहुविध पूरक निबन्धको आवश्यकता पर्दछ ताकि धेरै विद्यालयहरूमा आवेदन गर्न आवश्यक प्रक्रिया होइन।
प्रेस्टीज शस्त्र रेस: प्रत्येक वर्ष, आइभाइहरू भर्खरैका इन्टरनेट इन्टरनेट डाटाहरू प्रकाशित गर्न छिटो छन्, र शीर्षकहरू आम तौर पर संसारमा चिन्ता गर्छन् कि स्कूल "स्कूल इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आवेदक पोल्याण्ड" थियो वा "सबैभन्दा बढी चयनात्मक वर्ष स्कूल इतिहास । " र चाहे तिनीहरू स्वीकार्छन् वा होइनन्, आइभ्सहरू सधैं एकअर्कालाई तुलना गर्दै छन्। स्कूलहरू यस्तो बलियो नाम पहिचान छ कि उनीहरूलाई वास्तविकता भर्तीमा धेरै पैसा वा प्रयासको आवश्यकता पर्दैन, तर तिनीहरू वास्तवमा भारी भर्ती गर्छन्। थप अनुप्रयोगहरू अझ बढी छनौट गर्ने को अर्थ छ जुन बदले मा बढी प्रतिष्ठा हो।
अन्तर्राष्ट्रिय आवेदकहरू: सधै कम एडमिट दरहरूको एक महत्वपूर्ण टुक्रा विदेश बाट अनुप्रयोगहरूमा स्थिर वृद्धि हुन्छ। जबकि अमेरिकी उच्च विद्यालय वरिष्ठहरु को जनसंख्या उल्लेखनीय नहीं बढिरहेको छ, त्यो तथ्य विदेश बाट आवेदन मा लगातार वृद्धि द्वारा अफसेट छ। आईवीज विश्वभरको शक्तिशाली नामको मान्यता छ, र उनीहरू विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको योग्यताका लागि उदार वित्तीय सहायता प्रदान गर्छन्। चीन, भारत र कोरिया जस्ता देशहरूबाट हजारौं विद्यार्थीहरूले आइवी लीग स्कूलहरूमा लागू गर्छन्।
किन यो अन्यथा धेरै अन्य आईभिएसन भन्दा कर्नेलमा भर्ना हुन सजिलो छ?
धेरै तरिकामा, यो होइन।
कर्नेल विश्वविद्यालय प्रायः अन्य आईभीई (र आइवाईका आवेदकहरु) द्वारा देख्न सकिन्छ किनभने यो स्वीकृति दर सधै अन्य विश्वविद्यालयहरु भन्दा उच्च छ। तथापि, स्वीकृति दर, चयनता समीकरण को सिर्फ एक टुकडा हो। यदि तपाईं माथि GPA-SAT-ACT ग्राफहरूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले हेर्नु भएको छ कि Cornell विद्यार्थीहरु लाई समान मान्दछन् जसले हार्वर्ड र येलमा प्रवेश गर्नेहरूलाई बलियो बनाउँछ। यो सत्य हो कि यदि तपाईं एक सीधा विद्यार्थी हुनुहुन्छ धेरै एपी पाठ्यक्रमहरू र 1500 एसएटी स्कोरको साथमा, तपाईं हार्वर्ड भन्दा कर्नेलमा जाने सम्भव छ। कर्नेल एकदम ठूलो विश्वविद्यालय हो त्यसैले यो धेरै अधिक स्वीकार्य पत्रहरू पठाउँदछ। तर यदि तपाईं एक "बी" विद्यार्थी हुनुहुन्छ मिडलिंग एसएटी स्कोरहरूको साथमा, फेरि सोच्नुहोस्। कन्नेलमा पाउने तपाइँको परिवर्तनहरू अत्यन्तै कम हुनेछन्।
2021 को कक्षाको लागि स्वीकृति दर कहिले उपलब्ध हुनेछ?
आईआईवी लीग स्कूलहरू भर्खरका प्रवेश चक्रको लागि परिणाम प्रकाशित गर्न चाँडै आवेदकहरुलाई भर्खर निर्णय लिने निर्णय गरेको छ।
सामान्यतया अन्तिम संख्याहरू अप्रिलको पहिलो दिन वा दुईमा उपलब्ध हुन्छन्। ध्यान राख्नुहोस् कि अप्रिलमा घोषणा गरिएका स्वीकृति दरहरू प्रायः समयको साथमा परिवर्तन गर्नका लागि कलेजहरूले वसन्त र गर्मीमा आफ्नो रुटलिस्टसँग काम गर्छन् ताकि उनीहरूको नामांकन लक्ष्यहरू पूरा हुन सकेन।
आइवी लीग स्वीकृति दर को बारे मा एक अंतिम शब्द:
Ivies संग सम्बन्धित तीन टुकडे सल्लाह संग समाप्त हुनेछ:
तपाईले सँधै आईभीई स्कूलहरूमा पुग्नुपर्दछ । स्वीकृति दर यति कम छन् कि हजारौं असाधारण विद्यार्थीहरूले अस्वीकार गरे। तपाईंको आठ एपी क्लाउडहरू, 4.0 अपरिभाषित GPA र 1580 एसएटी अंक प्रवेशको गारंटी होइन (यद्यपि यो निश्चित रूपमा मद्दत गर्दछ!)। कहिलेकाँही, म हृदय-टूटेका विद्यार्थीहरूसँग भेट्न चाहन्छु जसले झूटो ढंगले ग्रहण गर्यो कि अस्वीकारको ढोकाबाट समाप्त हुने मात्र इभेजमा कम्तिमा एक ठाउँमा पुग्थ्यो। सँधै केही विद्यालयहरूमा आवेदन गर्नुहोस् जुन कम चयनयोग्य हुन्छ तापनि तपाईं प्रभावशाली विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने।
आईवीहरूको बारेमा केही जादुई छैन। जब विद्यार्थीहरू (र तिनीहरूका आमाबाबु) भेट्टाउँदा यो निराशाजनक छ, जसले आइवी लीग स्कूलमा प्रवेश गरेर आत्म-मूल्यको भावनालाई बाँधेको छ। अमेरिकामा सयौं महाविद्यालयहरू र विश्वविद्यालयहरू छन् जुन शिक्षा इभिएली इभिएगई भाषाको तुलनामा राम्रो वा राम्रोसँग वितरित गर्नेछ, र त्यहाँ विद्यार्थी वृद्धि र व्यावसायिक सफलताको सम्बन्धमा धेरै गैर-इआईभी लीग स्कूलहरू छन्।
आठ आइवाहरू सबै समान छैनन्। हरेक वर्ष तपाई बालबालिकाको राष्ट्रिय समाचार शीर्षक देख्नुहुनेछ जुन सबै आठ आइवी लीग स्कूलहरूमा पुग्यो। यो समाचार सधैं मलाई छोड्दछ किनकि हिक कसैले सबै आठ मा लाग्ने हुन्छ। एक विद्यार्थी जो कि शहरको हलचल मनपर्छ येल, ब्राउन वा कोलम्बियामा खुसी हुन सक्छ, तर डार्टमोथ र कर्नेलका साना शहरका स्थानहरूमा दुखी हुनेछ। ईन्जिनियरिङ्मा रुचि राख्ने विद्यार्थीले निश्चित रूपमा Cornell मा एक शीर्ष-कार्यक्रम कार्यक्रम पत्ता लगाउनेछ, तर त्यहाँ धेरै आइभाइहरू भन्दा धेरै राम्रो इन्जिनियरिङ स्कूलहरू छन्। एक स्नातक-केंद्रित ध्यान शिक्षाको लागी एक विद्यार्थीले कोलम्बिया र हार्वर्ड जस्ता विद्यालयहरूबाट बचाउन बुद्धिमानी हुनेछ जहाँ स्नातक नामांकन2देखि 1 सम्म स्नातक नामांकन भन्दा बढी हुन्छ।
पहिलो ग्रेड गणित - पहिलो ग्रेड गणित कोर्स अध्ययन
ट्री कक्षमा टर्गर दबाब
किन पाहुनाहरूलाई बहस गर्ने?
औंसमा ग्राम इकाई रूपान्तरण उदाहरण
वीईई के छ?
छाया मूल्यको धेरै परिभाषा
Shippai अनुवाद गर्दै
सीरियल किलर माइकल रस, द रोड्साइड अजीब
पिता Corapi SOLT को जवाफ: 'म बुझाईएको छैन!'
अमेरिकी नागरिक युद्ध: मेजर जनरल जेम्स एच। विल्सन
लियोनार्ड सुसेकिङ बीओओ
तपाईंको डीजल चमक प्लग कसरी बदल्नुहोस्
कसरी मर्बली र सुगन्धित पेपर बनाउनुहोस्
कलामा 'माध्यम' को परिभाषा के हो?
ईव - सबै जीवित आमा
एक Polyurethane वा Polystyrene सर्फबोर्ड छनौट
रसायन विज्ञान मा अक्टोकेट नियम व्याख्या
तीन प्रकारका इन्टरनेलुलर बलहरू
यूएस बच्चाहरु लाई थेरेइड हेल्थियर स्कूल लंच संग
पीएसीहरूको बारेमा - राजनीतिक कार्य समिति
ईसाई र सुसमाचार आस्टिस्टहरूले "हामी उच्च मा सुनेका स्वर्गदूतहरू" को शीर्ष 10 संस्करणहरू
क्यानाडामा ब्रिटिश कोलम्बियाको उत्पत्ति
तूफानबाट सूर्य: तिनीहरू कसरी फारम र के गर्छन्?